Tesco British Semi Skimmed Milk 2.272L, Oghere 4 | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco British Semi Skimmed Milk 2.272L, 4 Pints– Ordrs
Tesco British Semi Skimmed Milk 2.272L, 4 Agba
Pasteurized homogenised ọkara skimmed mmiri ara ehi.
Site na Ugbo British. Na-akwado ndị ọrụ ugbo mmiri ara ehi anyị tụkwasịrị obi. Fair maka oru ubi nkwa: Anyị na-ekwe nkwa na onye ọ bụla na-arụ ọrụ ugbo na-akwụ ụgwọ ọ bụla maka mmiri ara ehi ọ bụla, pint ọ bụla bụ 100% British na ehi ọ bụla na-elekọta nke ọma. Maka ozi ndị ọzọ gaa www.tescoplc.com/littlehelpsplan/
Ngwugwu ngwugwu: 2.272l